Momba anay - Zhejiang Gaozhong Plastic Machining Co., Ltd.
Zhejiang Gaozhong Plastic Machining Co., ltd.
Zhejiang Gaozhong Plastic Machines Co., Ltd. Any China Hose Town -Panan County, faritany Zhejiang, dia natsangana tamin'ny taona 1991, namokatra matetika ny orinasa: tsipika famokarana fantsom-pifandraisana vita amin'ny plastika, tsipika famokarana paompy miolikolika plastika, famokarana paipa PP / PE / PVC tsipika, extruder plastika, milina fanintona, milina miolakolaka, bobongolo fantsom-plastika ary karazana milina plastika hafa. Manana ny toeram-piasantsika izahay, koa afaka manao paipa plastika isan-karazany araka ny fangatahan'ny mpanjifa.
Ny orinasa dia manana vondrona talenta teknika tena tsara, ary manana fitaovana famokarana CNC mandroso. Nampitomboinay ny isan'ireo fitaovana isan-taona. Ankehitriny, ny orinasa dia efa manana mpiasa 30-40, ny mpiasa tsirairay dia niaraka tamin'ny orinasa nandritra ny telo taona mahery .Manana ny teknolojia avokoa izy ireo, amin'izay izahay afaka manome ny masinina manana kalitao avo lenta ny mpanjifa.
Mihoatra ny 40 ny mpiasa
1. Momba ny fitaovana dia nampanantena ny hatsaran'ny 12 volana ny GZSJ.
2. Mandritra ny fiantohana, tsy misy fahasimbana niniana natao tamin'ny fomba simika nanova ny ampahany simba, hikarakara maimaimpoana sy serivisy teknika izahay.
3. Maherin'ny 12 volana, ny Mpividy dia mila mandoa ny vidin'ny famokarana ny ampahany tonta, ary manome mandritra ny androm-piainana ny ampahany amin'ny fitaovana sy fitaovana malalaka
Manana endrika maherin'ny 15 taona sy famolavolana traikefa izahay ho an'ny namboarina tamin'ny milina plastika mety ilainao. Zhejiang Gaozhong Plastic Machines Co., Ltd. dia orinasa mpivezivezy manokana amin'ny famolavolana sy fanamboarana milina plastika. Ny orinasanay dia malaza amin'ny trano sy any ivelany amin'ny vokatra avo lenta sy rafitra serivisy feno.
Tsena lehibe : Vietnam, India, Egypt, Jordan, Afghanistan, The Middle East, Etc
Nampitomboinay ny isan'ireo fitaovana isan-taona. Mifantoka amin'ny fanatsarana sy fampivoarana ny fitaovana famokarana fantsona plastika mandritra ny 20 taona isika. Miaraka amin'ny haitao famokarana an-trano voalohany, nahazo fandrosoana haingana ny orinasa. Ny milina sy ny fitaovana plastika an'ny orinasa dia azo ampiharina amin'ny famokarana karazana fantsom-pifamoivoizana tariby fiara, fantsom-pifandraisana tariby sy tariby, fantsom-pandrefesana sy fantsom-panafody, fantsom-pidirana sy fivoahan'ny rano ho an'ny milina fanasan-damba, fantsom-panafody, fantsom-panafody sns .... Nandritra ny taona maro dia manome vokatra avo lenta ho an'ny GREE, Midea, Haier, Little Swan, ary orinasa fanta-daza maromaro izahay.
Ny orinasa dia manana ampahany amin'ny fampiratiana isan-karazany any an-toerana sy any ivelany isan-taona, dia hasehontsika koa ny tsipika famokarana fantsona mitaona amin'ny fampirantiana ary hitan'ny olona rehetra izany. Izahay dia hanazava ny fomba fiasan'ny masinina, inona ny fitaovana amin'ny antsipiriany rehetra.
Ny kalitao tsara dia ny làlan'ny ezaka ataontsika. Ny laza tsara no zakanay.
Vonona ny hianatra bebe kokoa? Mifandraisa aminay anio raha hanonona teny maimaim-poana!